धुर्मुस-सुन्तली फाउन्डेसनलाई यात्रा टिमको सहयोग ! - PUBLICAAWAJ
धुर्मुस-सुन्तली फाउन्डेसनलाई यात्रा टिमको सहयोग !
प्रकाशित : बिहिबार, चैत २८, २०७५१५:०८ पब्लिक आवाज / संवाददाता , अम्बिका
काठमाडौँ, फिल्म ‘ यात्रा अ म्युजिकल भ्लग ‘ द्वारा धुर्मुस-सुन्तली फाउन्डेसनलाई रकम रु. ५०,००० सहयोग गरेको छ । टिमले धुर्मुस-सुन्तली फाउन्डेसनद्वारा निर्माणरत ‘ गौतम बुद्ध अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला ‘ को निर्माण हेतु सहयोग गरेको हो ।
फाउन्डेसन मै गइ फिल्मका निर्देशक सम्राट शाक्य, प्रस्तुतकर्ताद्वय केशव भट्टराई र चिजकुमार श्रेष्ठ र निर्माता सुशील पोखरेलले उक्त सहयोग गरेका हुन् ।
सहयोग पश्चात सिताराम कट्टेल ( धुर्मुस ) ले फिल्मको सफलताको शुभकामना दिँदै सहयोग प्रतिआभार व्यक्त गरेका थिए । साथै उनले फिम यात्रामा समावेस गरिएको नेपालको सुन्दरताले नेपाली पर्यटनमा समेत टेवा पुग्ने बताएका छन् ।
फिल्मका प्रस्तुतकर्ता चिकुमार श्रेष्ठले धुर्मुस सुन्तलीको यस अभियानमा साथ दिन पाउदा निकै खुसि लागेको बताएका छन् । निर्माता सुशील पोखरेलले भने, ‘ हामी सलिनसँगै यात्रा टिम शनिवार क्रिकेट खेल्न टियु मैदान पुग्नेछौ । ‘
कार र मोटरसाइकल एक आपसमा ठोकिदा दुई जनाको मृत्यु
जन्ती बोकेको जीप दु’र्घटनामा चारको मृ’त्यु